एनआरएन यूकेका पदबहादुरहरू ! – News Portal of Global Nepali
एनआरएन यूकेका पदबहादुरहरू !
22/06/2017 मा प्रकाशित
लण्डन । एनआरएन युकेको अधिवेशन (सोझो अर्थमा चुनाब) केही महिनामा आउँदै छ । निर्वाचन समिति पनि बनिसकेको छ ।
सदस्य बनाउने क्रम सुरु भएको छ । जो उम्मेदवार बन्दै छन्, ती विशेष तातेका छन् सदस्य बनाउन ।
गत साल निर्वाचन समितिले अन्तिम घड़ीमा आएर उम्मेदवार बनेका मात्रै होइन, उम्मेदवारी नै नदिएका समेत सबैलाई निर्वाचित भनेर घोषणा गरेको थियो । एउटा पदमा पछि विधान संशोधन गर्ने गरी पाँच जना निर्वाचित भएका थिए । सदस्यभन्दा पदाधिकारी बढ़ी भएको अनौठो कार्यसमिति बनेको थियो । निर्वाचन समितिमाथि बाह्य दबाब थियो र दबाबको जीत भएको थियो ।
सहमति र समेट्ने प्रयोजनका लागि पद सिर्जना गरेर बाँडिएको बताइएकाले पद पाएपछिमात्रै सहमति गर्ने हाम्रो उदार चरित्र देखिएको थियो । आगामी कार्यकालमा सच्याएर जाने भनिएकाले विरोध जनाए पनि असहयोग गरिएन ।
म पनि निर्वाचित सदस्य रहेको कार्यसमितिले खास उपलब्धि केही गर्न नसके पनि पहिलेझैँ झगड़ा भने भएन । पदका निम्ति मरिहत्ते गरेर पद हत्याउन सफल धेरै जसो त मिटिंगमा पनि देखिएनन् । केही गर्न नसक्नुको जिम्मेबारी मेरो पनि हो । अध्यक्षको केही गर्ने ठूलो धोको, मिहिनेत र हौसला भने सधै रहिरह्यो ।
तर हालसम्म चार सय सदस्यले पनि सदस्यता नवीकरण नगरेको एनआरएनमा ६ जना उपाध्यक्ष र त्यसैगरी अन्य पदाधिकारीलाई पनि निरन्तरता दिएर जाने भन्ने कुरोमा फेरि छलफल हुनु आवश्यक छ । एक पटक बिग्रिएको संस्कार सच्याउनुको साटो त्यसलाई निरन्तरता दिनु पक्कै जायज होइन ।
फेरि केही थान मैं जस्ता पदलोलुप मान्छेहरूलाई उपाध्यक्ष बनाउन मात्रै सदस्य बन्ने हो या अन्य केही प्रयोजन छ भन्ने छुट्याउन सजिलो छैन । हामीले स्वस्फूर्त रूपमा सदस्य बन्न भीड़ लाग्ने गरी संस्थाको औचित्य र भूमिका बारे बुझाउन सकेनौं । कतिपय त हामी आफैले बुझेका छैनौं, अरूलाई के बुझाउने ।
गत चुनाबले तय गरेको गलत बाटोलाई सच्याएर बढ़ीमा दुई वटा उपाध्यक्ष ९एक महिला० र चुस्त संगठनको निर्माण हुनु जरूरी छ । सचिब क, सचिब ख, सचिब ग जस्ता पदको औचित्य पुष्टि हुनु जरूरी छ ।
एक घण्टा ढिलो गरी चिट्ठी आउँदा सदस्यता नै बन्न नपाइने तर चुनाबमा विजयी बन्न उम्मेदवारी सम्म दिनुनपर्ने अवस्थाले संगठनलाई बलियो बनाउँदैन । सदस्यभन्दा पदाधिकारी बढ़ी भएको कार्यसमितिको संरचनाले संगठनको गरिमा बोक्दैन ।
एनआरएनप्रतिको निराशा र वितृष्णाको कारण यो पनि एक हो । यहाँको प्राज्ञिक वर्ग अझै संस्थाबाट टाढा छ ।
अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर उपाध्यक्ष निर्वाचित हुने संस्कार तोड्ने र संस्थालाई यसको स्वाभाविक संरचनामा फर्काएर यसको गरिमा कायम गर्ने अवस्था नभएसम्म सदस्य बनेर मजस्ता केहीको पदमा पुग्ने भऱ्याङ मात्र बन्नेमात्रै हो ।
एनआरएन मजस्ता केही व्यक्तिको निजी संस्था होइन, यो आम प्रवासी नेपालीको साझा संगठन हो । यो गैरराजनीतिक, गैरसाम्प्रदायिक र गैरजातीय कल्याणकारी साझा संस्था हो । आम प्रवासी नेपालीसँग सरोकार राख्ने मुद्दा बोक्न र ग्लोबभरि छरिएका नेपालीलाई एकसूत्रमा बाँध्न पनि यो संस्था जरूरी छ । तपाईंको आफ्नो संस्था हो यो । यसलाई दुरुपयोग हुन नदिन उद्देश्य सहित सगर्व सदस्य बन्नुहोस र यसलाई पदबहादुरहरूबाट बचाउनुहोस् ।
(नारायण गाउँलेको फेसबुकबाट साभार )
‘प्रोतुगलबाट नेपाल जाने यात्रु नक्कली कोरोना रिपोट लिएर जान्छन्’
१९१३ कोरोना संक्रमित थपिए, थप १५ जनाको मृत्यु
लण्डनमा लकडाउनविरुद्ध प्रदर्शन, सयभन्दा बढी पक्राउ
राजन क्षेत्रीको नाम बेलायतको प्रतिष्ठित हिरो अवार्डमा मनोनयन